Factory fanesorana tombokavatsa laser - Mpanamboatra fanesorana tatoazy Laser China
Portable Q Switch Nd Yag Laser manaisotra tombo-kase laser mampiasa gel karbonina
Freckles, sunburn, spot age, chloasma, aty, spot dermal, sns.
Fanavaozana ny hoditra sy ny fotsifotsy, ny mason-koditra tery
Lokon'ny hoditra tsy mitovy
Mariky ny mony
Mole mena sy mainty
Tatoazy, tatoazy volomaso mena sy manga
2021 Professional Pico 1064nm 532nm Picosecond Laser Tattoo Removal Machine Ho an'ny teboka / pigmentation / fanesorana freckle
532NM 1065NM Picosecond Laser Tattoo Remover Nd Yag Laser Fanesorana Tatoazy
1. Fray, sun-sun, teboka taona, chloasma, teboka aty, teboka dermal, sns.
2. Fanavaozana ny hoditra sy ny fotsifotsy, ny mason-koditra tery
3. Lokon'ny hoditra tsy mitovy
4. Mariky ny mony
5. Rano mena sy mainty
6. Tatoazy, tatoazy volomaso mena sy manga
2021 Professional Pico 755nm Picosecond Laser Tattoo Removal Machine Ho an'ny teboka / pigmentation / fanesorana freckle
Fitsipika miasa Araka ny fitsipiky ny photopyrolysis mifantina, ny fotoana fohy kokoa amin'ny fiasan'ny laser, ny hery kely noho ny angovo laser voangona ao amin'ny sela kendrena dia hiparitaka amin'ny sela manodidina. Ny angovo dia voafetra amin'ny faritra kendrena hotsaboina, ary ny tavy ara-dalàna manodidina dia voaro, noho izany dia mihatsara sy mifantina ny fitsaboana. Ny sakan'ny pulsa an'ny laser picosecond dia zato monja amin'ny an'ny Q- nentim-paharazana. laser niova. Und ...
Masinina Picosecond Laser Tattoo Fanesorana ny hoditra manadio hoditra manala hoditra
Inona no atao hoe laser Pico faharoa? 532nm dia afaka manala ny pigment super ficial amin'ny faritry ny mason'ny maso, toy ny mariky ny fahaterahana, ny nevus an'ny ota, ny toerana Kafe, ny loko mena ary ny lesoka vaskular, ny molotra erythema. Mety kokoa amin'ny lokon'ny hoditra mainty. 1064nm dia afaka manaisotra ny loko pigma derma amin'ny tarehy sy vatana, marika toy izany, nevus an'ny ota, teboka kafe, tatoazy manga sy mainty. Famantarana: 1. Tondra-dàlana azo tsaboina toy ny freckles, sunburn, spot of age, chloasma, teboka atiny ary teboka 2 dermis, mamelombelona ny hoditra ...
2021 Hery lehibe Fivarotana mafana Picosecond Laser Professional Multi-Functional Ndyag Laser Beauty Equipment Tattoo Removal Machine
Fampiharana Laser Pico Faharoa
☀Mainty pigmentation: mariky ny fahaterahana, Ota nevus, Ito nevus, nevus mainty, teboka sokajin-kafe any an-toerana sns.
☀Mainona pigmentation vita amin'ny olona: Tatoazy manga, mainty, mena, na volontsôkôlà; molotra na tsipika pigmentation epidermal
☀Lentigine vaskola: lesoka vaskola, lalan-kala, lalan-drantsika, fanalefahana ny hoditra amin'ny alàlan'ny fikolokoloana laser
☀Fitsaboana tarehy amin'ny tarehy: fanalefahana ny hoditra, fikolokoloana karbaona, fanatsarana ny hoditra.
Laser Picosecond ho an'ny fanesorana laser an'ny tatoazy
Ny laser Pico-faharoa no teknolojia vaovao farany ampiasaina amin'ny hatsaran-tarehy. Amin'ny alàlan'ny angovo laser an'arivony tapitrisa mahery mba hikosehana ny loko amin'ny tavy amin'ny hoditra mba hahatratrarana ny valin'ny fanesorana ny tatoazy sy ny loko amin'ny karazana loko rehetra.
Amin'ny alàlan'ny solomaso miavaka manokana, ny laser Pico faharoa dia afaka manova ny angovo laser ho tsindry malefaka hamorona collagen vaovao amin'ny alàlan'ny fanerena ireo sela ary hampihetsika ny sela voajanahary nefa tsy handoroana na hanimba ny hoditra.
Fomba fitsaboana: Single & Double
Loha fitsaboana: lohan'ny laser tapaka, 585nm, 650nm, loha sela
milina fanesorana tombokavatsa laser picosecond
Pico faharoa laser no teknolojia vaovao farany ampiasaina amin'ny estetika. Amin'ny alàlan'ny angovo laser an'arivony tapitrisa mahery mba hikosehana ny loko amin'ny tavy amin'ny hoditra mba hahatratrarana ny valin'ny fanesorana ny tatoazy sy ny loko amin'ny karazana loko rehetra.
Herin'ny milina: 3000W
Halavan'ny halavany: 1064nm, 532nm （650nm ary 585nm Tsy voatery）
Mode: Pulse tokana sy pulse indroa
Herin'ny famoahana: Single: 1064nm ： Max 800mj
532nm ： Max 400mj
Double: 1064nm ： Max 1600mj
532nm ： Max 800mj
Pulse Duration: 750ps
Frequency: 1-10Hz azo ovaina
Haben'ny habe: 2-10mm azo ovaina
Rafitra fampangatsiahana: Fangatsiahana rano, fihenan'ny rivotra
Masinina mpanentana hozatra Ems, Shr Ipl Opt, Fanesorana volo Shr Opt Ipl, Co2 Laser Laser miato, fanesorana ny holatra, Laser estetika Co2,